Graphic စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေဖို့ - Knowledge is Free
Graphic စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေဖို့
Computer အသုံးပြုကြရာမှာ Monitor Screen ဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ စာလုံးတွေ သေးငယ်နေမယ်၊ ပုံရိပ်တွေေ၀၀ါးနေမယ်၊ Screen တုန်ခါမှုတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းလှသလို မျက်စိကိုလည်း အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Computer Display ပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ကောင်းလာအောင် ပြုလုပ်နိုင်တာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Graphic Card နဲ့ တခြား Windows Setting တွေကို ချိန်ညှိမှုလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့ အမြင်စွမ်းရည် ပိုကောင်းလာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
PC ရဲ့ Graphic Card ကို သူ့ Windows Driver ကနေ ထိန်းချုပ်ပေးနေတာကြောင့် Card အတွက် နောက်ဆုံး ပေါ် Driver တွေ ရရှိဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ကိုယ်အသုံးပြုနေတာ ဘယ် version လဲဆိုတာသိရင် Desktop ပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပြီး Properties ကို ရွေးလိုက်တဲ့အခါ Display Properties Dialog Box ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ Setting Advanced-Adapter (XP မှာ Properties Driver) စသဖြင့် click လုပ်ပေးပါ။
Graphcis Card ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Web Site အတွင်းဝင်ရောက်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် Driver Version ကို Download လုပ်ယူပါ။ ဒါပေမယ့် ကြိုတင်ထုတ် (Beta) Version ကို Install မလုပ်မိဖို့ သတိပြုရပါမယ်။ Beta ဆိုတာ အလုပ်လုပ်ဆဲ အဆင့်မှာသာရှိသေးပြီး အပြီးသတ် မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် ရရှိမယ့်အကျိုးအမြတ်ထက် ပြဿနာပေးနိုင်တာက ပိုပါတယ်။ Graphics Driver အားလုံးမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Setting တချို့ကို ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ်။
Screen ပေါ်မှာ ပြသပေးနိုင်တဲ့ Dot ၊ ဒါမှမဟုတ် Pixel (Picture Element ရဲ့ အတိုကောက်) အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Resolution ပိုများရင် တစ်လက်မ အကွက်အတွင်းမှာ ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Dot အရေအတွက် ပိုလာတဲ့အတွက် ပုံရိပ်တွေကို ပိုမိုပြတ်သားစေပါတယ်။ Monitor ကတော့ ပိုမြင့်တဲ့ resolution ကို လက်ခံ နိုင်ရပါမယ်။ Resolution မြင့်မားလာတဲ့အတွက် Graphics Board နဲ့ PC ပေါ်မှာ Processing တောင်းဆိုမှုတွေ တိုးတက် များပြားလာပါလိမ့်မယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်လောက်က ထုတ်လုပ်တဲ့ Computer တွေမှာပါရှိတဲ့ Graphics Card တွေဟာ 1024x768 Resolution ကို အနည်းဆုံး Support လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် 1600 x 1200 ထိတောင် Support လုပ်နိုင် ကြပါတယ်။ စနစ်ဟောင်းတွေမှာတော့ အမြင့်ဆုံး Resolution 800 x 600 အထိသာ Support လုပ်နိုင်ကြ ပါတယ်။
Screen Resolution ကို ချိန်ညှိလိုက်ရင်တော့ Display Properties ကို ဖွင့်ပြီး Setting ကို Click လုပ်ပါ။ 'Screen Area' ၊ ဒါမှမဟုတ် 'Screen Resolution Bar' ကို Higher (More) ၊ ဒါမှမဟုတ် Lower (Less) ဆီကို Slide လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Resolution ပိုမြင့်တာဟာ ပုံရိပ်အရည်အသွေး ပိုကောင်းလာစေပေမယ့် Icon တွေ၊ စာသားတွေနဲ့ တခြား Object တွေကို ပိုမိုသေးငယ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Setting ကို စမ်းသပ်ရွေးချယ်ရပါမယ်။ အများစုတို့အတွက် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုရနိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး Resolution ဖြစ်ပါတယ်။
Graphics Card ကနေ Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Color အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Color အရေအတွက် ပိုသုံး ရင် ပုံရိပ်အရည်အသွေး ပိုကောင်းပေမယ့် သင့်စနစ်ပေါ်မှာ Processing တောင်းဆိုမှု ပိုများလာပါလိမ့်မယ်။
Graphics Card ရဲ့ Color-depth Setting တွေကို Display Properties ထဲရှိ Setting Tab အောက်မှ Color Dropdown Menu (XP မှာ 'Color quality') မှာ List လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Pixel တိုင်းအတွက် သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ Bit အရေအတွက်နဲ့ ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်။ True Color (24-bit Color) ဟာ 16,777,216 Color ခွင့်ပြုနိုင်ပြီး High Color (16-bits) ကတော့ 65,536 Color Support လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 16-bits Color ထက် ပိုနည်းရင် ပုံရိပ်တွေ ကြည့်မကောင်းတော့ပါဘူး။ Driver အတော်များများတို့ဟာ 8-bit (256 Colors) ၊ ဒါမှ မဟုတ် 16-bit (32,536 Colors) Setting တွေ ပေးမထားကြပါဘူး။ PC အသစ်တွေမှာဆိုရင် 32-bit Color ကို Support လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Color ၁၆ သန်းအပြင် True Color အဖြစ် Color တွေ ပေါင်းထည့်ပေးထား ပါတယ်။ အလျင်အမြန်ရွေ့လျားတဲ့ 3D Game တွေမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပေမယ့် သမားရိုးကျ Application တွေ မှာတော့ အနည်းငယ်သာ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
Hertz ၊ ဒါမှမဟုတ် Cycles Per Second နဲ့ ပြသပေးပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာ ပုံရိပ်တွေ Redrawn လုပ်တဲ့အခါ တစ်စက္ကန့်မှာ ဘယ်နှကြိမ် လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာပါပဲ။ Refresh Rate သိပ်နိမ့်လွန်းရင် Screen တုန်ခါမှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါ တယ်။ Screen တုန်ခါမှုကို မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တောင်မှ မျက်လုံးကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
တချို့က 72 Hz ထက် မနည်းသင့်ဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် တချို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ အနည်းဆုံး 80 Hz ရှိသင့်တယ်လို့ ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ Refresh Rate တွေကို စမ်းသပ်ပြီး ကိုယ့်အတွက် ကိုက်ညီမယ့် Rate ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Refresh Rate သိပ်မြင့်လွန်းပြန်ရင်လည်း မကောင်းပြန်ပါဘူး။
Windows XP မှာ Screen ရဲ့ Refresh Rate ချိန်ညှိလိုရင် Display Properties ဖွင့်ပြီး Settings. Advanced. Adapter. List All Modes လို့ Click လုပ်ပေးပါတယ်။ Support လုပ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးစာရင်းထဲကနေ Refresh Rate ၊ Screen Resolution နဲ့ Color Depth အတွဲတွေထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
တခြား Windows Version တွေမှာ Display Properties ကို ဖွင့်ပြီး Setting. Advanced. Adapter လို့ Click လုပ်ပါ။ 'Refresh Rate' Drop-down Menu ထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီ Option တွေ မတွေ့ရဘူး ဆိုရင် သင့် Graphic Card နဲ့ Monitor ဟာ Multiple Refresh Rates ကို Support မလုပ်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ရွေးချယ်စရာ Option တွေ မမြင်တွေ့ရဘူးဆိုရင်တောင်မှ Screen ရဲ့ Resolution ၊ ဒါမှမဟုတ် Color Depth ကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် Display ရဲ့ Refresh Rate ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Specification သုံးခုဟာ Graphic စွမ်းဆောင်ရည် အတွက် အပြိုင်အဆိုင် အလုပ်လုပ်ပေးနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့် Setting တစ်ခုကို တိုး၊ နောက်တစ်ခုကို လျှော့ စသဖြင့် ချိန်ညှိယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Color Depth ကို 32-bit ကနေ၊ 16-bit ကို လျှော့ချလိုက်ရင် Refresh Rate ကို 60Hz ကနေ 75Hz ထိ တိုးမြှင့်လို့ ရနိုင်ပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Resolution ကို 800 x 600 ကနေ 1024 x 768 အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါမယ်။
Windows ဟာ Screen ရဲ့ Refresh Rate ကို စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမှာ အလိုအလျောက် နေရာချထား ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့် Monitor ကို Detect လုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာ နှေးကွေးတဲ့ 60Hz မှာ ထားပေးပါတယ်။ Windows XP ဟာ သင့် Monitor ကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်သိရှိရဲ့လားဆိုတာ သိလိုရင် Display Properties ကိုဖွင့်ပြီး Settings. Advanced. Monitor လို့ Click လုပ်ပါ။ တကယ်လို့ သင့် Monitor ဟာ 'Monitor type' အောက်က စာရင်းထဲမှာ မပါ ရှိဘူးဆိုရင် ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Web Site ကနေ Driver ကို Download လုပ်ယူရပါမယ်။
တခြား Windows Version တွေမှာ Plug and Play ကို Enable လုပ်ထားရဲ့လားဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ Display Properties ထဲက Setting Tab ပေါ်ရှိ 'Display' အောက်မှာ သင့် Monitor ကို ဖော်ပြပေးထားသလားဆိုတာ ကြည့်ပါ။ Advanced Monitor လို့ Click လုပ်ပါ။ Automatically Detect Plug & Play Monitors ကို Chech လုပ်ထားရဲ့လား ဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ တကယ်လို့ Check မလုပ်ရသေးရင် သူ့ကို Select လုပ်ပြီး Refresh Rate ကို Windows ရဲ့ Default 60Hz ကနေ ပိုမြင့်တဲ့ Rate မှာ နေရာချပေးလိုက်ပါ။
Windows Component တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Direct X ဟာ Multimedia လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ လက်ရှိ Direct X ရဲ့ Version ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုရင် Start. Run လို့ Click လုပ်၊ dxdiag လို့ ရိုက်သွင်းပြီး OK ကို Click လုပ်ပါ။ System Tab ကို ရွေးချယ်ပြီး Screen ရဲ့အောက်ပိုင်းရှိ System Information အောက်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။ နောက်ဆုံး Version ကတော့ Direct X9ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ မရှိသေးရင် find.pcworld.com/34517 ကနေ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Monitor ပေါ်က Control များ
ပုံရိပ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ရာ Monitor ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ Control တွေနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါ သေးတယ်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Model ပေါ်မူတည်ပြီး Option တွေ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Monitor အများစုပေါ်မှာ Brightness နဲ့ တခြား Control တွေ ပါရှိဖို့ များပါတယ်။
Brightness နဲ့ Contrast ကို ချိန်ညှိပါ
သင့် Screen ပေါ်မှာ Gray-Scale ပုံရိပ်တစ်ခု Display လုပ်ကြည့်ပါ။ (find.pcworld.com/34532 ကနေ အဲဒီ ပုံရိပ်မျိုး Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်) ခြယ်ပေးထားတဲ့ Shade ၁၇ ခုကို ကောင်းကောင်းမြင်တွေ့ရဲ့လားဆိုတာ သေသေ ချာချာ ကြည့်ပါ။ Brightness နဲ့ Contrast ခလုတ်တွေသုံးပြီး ညှိပေးပါ။
Center and Align
Monitor ပေါ်က Screen အထားအသို Control တွေသုံးပြီး ပုံရိပ်ကို Screen အလယ်တည့်တည့် ရောက်အောင်နဲ့ အနားသတ်အစွန်းများ ဖြောင့်တန်းနေအောင် ချိန်ညှိပါ။ မျက်စိထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဖို့နဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက် ခြင်းစတဲ့ တခြားပြဿနာတွေကနေ ရှောင်ရှားနိုင်အောင် Screen ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကို မျက်လုံးနဲ့တစ်တန်းတည်းဖြစ်နေအောင် နဲ့ ခေါင်းနဲ့တစ်တောင်ကျော် အကွာအဝေးလောက်မှာ ထားပါ။ အဲဒီ အနေအထားကတော့ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Screen ကို အလင်းရောင် တိုက်ရိုက်မကျနိုင်တဲ့ဘက် လှည့်ထားပေးပါ။ အဲဒီလို မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Glare Filter တစ်ခု ၀ယ်ယူတပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
Screen ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး စိုထိုင်းတဲ့ အ၀တ်စနဲ့ ညင်ညင်သာသာ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပေးပါ။ Screen မှာ အရမ်း ညစ်ပေနေရင်တောင်မှ Cleaning Solution တွေ အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာ Coat လုပ်ထား တာတွေ ပျက်စီးကုန်စေနိုင်ပါတယ်။ Monitor အိမ်ခွံပေါ်က လေ၀င်လေထွက် အပေါက်တွေမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ အပူလွန်ကဲခြင်းဟာ Monitor ပျက်စီးစေဖို့ ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Screen ပေါ်မှာ ဘာမှ ပေါ်မလာဘူးဆိုရင် Monitor Cable ချောင်နေခြင်း၊ Power ကြိုးတပ်မထားခြင်း၊ Brightness Setting ကို အနိမ့်ဆုံးမှာ ထားမိခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Monitor ပျက်သွား လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ လောင်ကျွမ်းတဲ့အနံ့ ထွက်လာခဲ့ရင်၊ တဖျစ်ဖျစ် အသံတွေကြားရရင် Monitor ကြွသွားပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ။ အလျင်အမြန် မီးပိတ်လိုက်ပါ။ Monitor တွေဟာ သူ့အလိုလို လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပါ။
အသုံးမကျ၊ ပျက်စီးနေတဲ့ Graphics Driver တွေဟာလည်း PC ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Graphics Driver ပျက်စီးယိုယွင်းနေသလားဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ Windows နဲ့ ပါရှိလာတဲ့ VGA Driver ကို Install လုပ်ကြည့်ပါ။ ပြဿနာ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် Monitor ရဲ့ မူလ Driver ၊ ဒါမှမဟုတ် Updated Version တစ်ခုကို Install လုပ်ပါ။
တချို့ Graphic Card တွေဟာ တခြား Hardware Device တွေနဲ့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Windows ဟာ Graphics Acceleration Function တွေကို Disable လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ Display Properties ကိုဖွင့်ပြီး Setting. Advanced. Troubleshooting (XP နဲ့ 2000) ၊ ဒါမှမဟုတ် Setting. Advanced. Performance (98 နဲ့ Me) လို့ Click လုပ်ပါ။ Hardware Acceleration အောက်မှာရှိတဲ့ Slider ကို ဘယ်ဘက်အစွန် ဆုံးရွေ့ပြီး Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Screen ပေါ်မှာ ပုံရိပ်တွေ တုန်ခါနေမယ်၊ မှုန်ဝါးနေမယ်ဆိုရင် အနီးအနားမှာ သံလိုက်စက်ကွင်း ရှိနေလို့ပါပဲ။ နာရီ၊ လျှပ်စစ်မော်တာ သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ လျှပ်စစ်အား အသုံးများတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို Monitor နဲ့ ဝေးဝေးမှာထားပါ။ နံရံနောက် ကွယ်မှာ သွယ်တန်းထားတဲ့ Power လိုင်းတွေဟာလည်း အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Monitor ကို နံရံ နဲ့ ဝေးဝေးထား သုံးသင့်ပါတယ်။ Screen ပေါ်က ပုံရိပ်တွေဟာ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ ဒါမှမဟုတ် အစိမ်းရောင် သန်းနေတယ်ဆိုရင် Graphcis Card နဲ့ Monitor ဆက်သွယ်တဲ့ Cable ချောင်နေလို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Cable ရဲ့ Connector ထဲမှာ ပင်ချောင်းကလေးတွေ ကွေးကောက်နေသလားဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပင်ကလေးတွေကို နှုတ်သီး ချွန် ပလာယာသုံးပြီး ဖြောင့်တန်းပေးရပါမယ်။ On-Screen Object တွေပေါ်မှာ သက်တံရောင်စဉ်ပုံ ကျရောက်နေခဲ့ရင် သူ့ကို ချိန်ညှိဖို့ တချို့ Monitor တွေမှာ Convergence Control တွေ ပါရှိပါတယ်။ ။
(ဖိုးနိုင်ဝင်း (Masterpiece) Robot ရိုဘော့မှာလည်း အသည်းနဲ့ပါနှင့် အခြားကွန်ပျူတာဆောင်းပါးများ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြထား ပါသည်။)
Posted by kmo at 9:19 PM
Programmer အကြိုက် Online ရတနာသိုက်များ